इमरान खानले लगाउलान् अजिंगरको छालाका चप्पल? - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > विश्व समाचार > इमरान खानले लगाउलान् अजिंगरको छालाका चप्पल?
पाकिस्तानको खैबर पख्तूनख्वा प्रान्तको राजधानी पेशावरमा इमरान खानका लागि चर्चित जमाना कप्तान चप्पल बनाउने नूरउद्दीन काका यो पटक उनका लागि सर्पको छालाबाट विशेष चप्पल बनाइरहेका छन् । यो चप्पल प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई ईदको उपहारका रुपमा दिइनेछ ।
नूरउद्दीन काकाले यो पटक इमरान खानलाई मन पराउने एकजना व्यक्तिले उनलाई आफ्ना कप्तानका लागि विशेष किसिमको उपहार दिन चाहेको बताए । नोमान नामका ती व्यक्तिले यसका लागि अमेरिकादेखि सर्पको छाला मगाएका छन् । यो छालाबाट इमरान खानका लागि चप्पल बनाउने उनको इच्छा थियो । नूरउद्दीन काकाले चप्पल बनाउन शुरु गरिसकेका छन् । ईदभन्दा पहिला नै यी चप्पल इमरान खानलाई उपहारका रुपमा दिइने उनलाई विश्वास छ ।
उनले भने, ‘यो निकै आरामदायी चप्पल हुनेछ, जसमा इमरान खानलाई गर्मी हुनेछैन । उनी यो चप्पल लगाएर जति काम गरे पनि थाक्ने छैनन् । मलाई विश्वास छ हाम्रा कप्तानलाई यो चप्पल निकै मन पर्नेछ ।’
न्ूरएद्दीन काका ठूला छोरा सलामाउद्दीनले यो पटक आफुले चप्पल बनाउन लागेको बताए । यो चप्पलको खाका उनले र उनका बाबुले बनाएका हुन् । उनले भने, ‘यो चप्पलको खाका हेर्दा साधारण पेशावरी चप्पल जस्तै हुनेछ तर, जब यसलाई लगाएपछि हेर्नेहरुले थाहा पाउनेछन्, यो निकै फरक छ ।’
सलामाउद्दीनका अनुसार यो चप्पल बनाउन चार फिट सर्पको छाला प्रयोग गरिनेछ । उनले प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई यो चप्पल उपहार दिएपछि यसको ब्राण्ड नाम पनि राखिने बताए । यो चप्पल बनाउन करिब ४० हजार पाकिस्तानी रुपैयाँ लगानी हुनेछ । उनले यसअघि पाकिस्तानमा सर्पको छालाबाट चप्पल नबनाइएको बताए । यो चप्पल पूर्णरुपमा हातबाट बनाइनेछ । र निकै समय लाग्नेछ ।
संसारमा सर्पको छालाबाट कैयौं किसिमका वस्तुहरु बनाइन्छ । जसलाई शौखिन मानिसहरु उपयोग गर्छन् । उता जनावारको अधिकारका लागि काम गर्नेहरुको समूह भने यस किसिमका वस्तुहरुको विरोध गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रि बजारमा अजिंगरको छालाबाट बनेको वस्तुको मुल्य हजारौं डलरसम्म हुन्छ ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार यो चप्पल अजिंगरको छालाबाट बनाइनेछ । किनकी साना सर्पहरुको छालाबाट केही बन्न सक्दैन । यसैले ठूला सर्पहरुको छाला प्रयोग गरिन्छ । जसमा अजिंगर पर्छ ।
यूनिभर्सिटी अफ बाग, पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरका पशु विशेषज्ञ प्राध्यापकले सर्पको छालाको तस्वीर देखेपछि यो अजिंगरको छाला भएको बताए । उनका अनुसार पाकिस्तानमा अजिंगर लोप भइसकेको छ वा निकै कम पाइन्छ । पाकिस्तानमा हाल कश्मीरको भम्बर जिल्लामा मात्र अजिंगर पाइन्छ ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार पाकिस्तानमा अजिंगरको संख्या कम हुनुको कारण गैर कानुनी व्यापार र वातावरणसँग सम्बन्धित कारण हुन् । वन विभागका अधिकारीहरुका अनुसार अझै पनि अजिंगरको तस्करी र छाला विक्रीका मुद्दाहरु आउने गरेका छन् । हालैको दिनहरुमा इस्लामावाद वाइल्ड लाइफ म्यानेजमेन्ट बोर्डका अधिकारीहरुले कम्तिमा दुई अजिंगरका छाला बरामद गरेका थिए ।
अधिकारीहरुका अनुसार यी छालाहरुको विदेशमा तस्करी गर्ने प्रयास भएको थियो । पाकिस्तानको बलूचिस्तानका साथै दूरा देशमा अजिंगर सुरक्षित प्रजातिको रुपमा दर्ता गरिएको छ । यसलाई बेच्न वा खरिद गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।